कर्णालीमा -याफ्टिङ महोत्सव हुँदैं मगलवार, फाल्गुन १४, २०७५
राउटे भन्छन् -'जहानपाल्न जागिर खानै पर्यो' सोमवार, फाल्गुन १३, २०७५
अविवाहित राउटे युवायुवती शनिवार, फाल्गुन ११, २०७५
साहित्यकारको जमघट ...तिमीले बालेको आगो ताप्नेहरुको भीडमा तिमी नै चिस्यानमा छौ । मगलवार, माघ २९, २०७५
नेपालगन्जमा शिव साधना शिविर हुदैं नेपालगन्जमा चौथो शिव साधना शिविर हुने भएको छ । शिवरात्रीको विशेष अवसर पारेर उक्त शिविर सञ्चालन गरिन लागेको हो । परम उद्धारकर्ता संकटमोचन स्वरुप गुरु मदनबाबाको सानिध्यतामा आगमी फागुन १६ देखि २० गते सम्म नेपालगन्ज १० भृकुटिनगरको खुला चउरमा शिविर सञ्चालन हुनेछ । शुक्रवार, माघ २५, २०७५
के विवाह गर्नैपर्छ ? विवाह नगर्दा के हुन्छ ? विवाह सामाजिक परम्परा हो । त्यसैले विवाहले सामाजिक मूल्य र मान्यता राख्छ । हामीकहाँ के सोचाई छ भने, जिन्दगी चलाउन विवाह गर्नुपर्छ । विवाहपछि जब एक पुरुष र महिला एकाकार हुन्छन्, उनीहरु दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्छन् । बिहिवार, माघ २४, २०७५
चौपाया संरक्षण गर्न आदेश स्थानीय तहमा रहेका छाडा पशु चौपायाको उचित ब्यवस्थापनको ब्यवस्था मिलाई सो सम्बन्धि त्रैमासिक प्रतिवेदन एक बर्ष सम्म अदालतमा पेश गर्नु भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले अन्तिम सुनुवाई गरेको छ । बिहिवार, माघ २४, २०७५
सिंजा राज्यको हिउँदे राजधानी, पर्यटनमा फड्को मार्दै बाइसे–चौबिसे पश्चिम नेपालको विशाल राज्य हो जुम्लाको सिंजा । दैलेखको दुल्लू त्यही राज्यको हिउँदे राजधानी हो । जुम्लामा हिउँ पर्नासाथ जाडो छल्न त्यहाँका राजामहाराज दुल्लूमा आएर बस्थे । जाडो मौसम भरि दुल्लूबाट विशाल सिंजा राज्यको प्रशासन चल्थ्यो । राजा, प्रशासकहरु र जाडो अवधिभर दुल्लू मै बस्थे । तत्कालिन समयको शक्तिशाली दुल्लू–२०४६को आन्दोनपछि गुमनाम भएपछि तत्कालिन द्वन्द्वको समयमा माओवादीको प्रतिकार गरेर सुर्वण अक्षरले नाम लेखायो । नेपाल गणतन्त्र हुदै संघीय राज्यमा प्रवेश गरेपछि भने ओझेलमा प¥यो । पछिल्लो समय सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन दबाबस्वरुप विद्रोह गरेर चर्चामा आयो, दुल्लू । बुधवार, माघ २३, २०७५
सामाजिक सञ्जालमा ‘कारुणिक सेल्फी’ सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक ‘कारुणिक तस्बिर’ भाइरल बनेको छ । एक अन्जान फोटोग्राफरले खिचेको केही बालबालिकाको यो तस्बिर लाखौँ व्यक्तिले शेयर गरेका छन् । तर तस्बिर खिच्ने फोटोग्राफर को हुन् र यो कहाँको तस्बिर हो भन्ने खुलेको छैन । मगलवार, माघ २२, २०७५
खजुरामा महोत्सवको तयारी तिव्र बाँकेको खजुरामा हुन लागेको ‘प्रथम प्रादेशिक औद्योगिक लघु घरेलु तथा कृषि, प्रविधि, व्यापार एवं पर्यटन महोत्सव–२०७५’ मेलाको तयारी ७० प्रतिशत पुरा भएको छ । सोमवार, माघ २१, २०७५
पर्यटकको पर्खाईमा ‘सतखलुवा ताल’ अघिल्तिर घना जङ्गल छ । पछिल्तिर पहाडी र थारूहरूको बाक्लो बस्ती छ । जङ्गलसगैं सटेको सतखलुवा ताल, तालको पूर्वतिर ग्याँग र पश्चिममा भादा खोला छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको बैदीचोकबाट साढे तीन किलोमिटर उत्तर लागेपछि सतखलुवा ताल पर्छ । ताल पुग्नुअगावै फराकिला बाटा, सफा मनोरमदृष्यका बीचमा सतखलुवा होमस्टे छ, जहाँ आउने पाहुनालाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरिन्छ । बर्दिया जिल्लाको बारबर्दीया नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित सतखलुवा पुग्ने जोकोही पर्यटक आनन्दित नभइरहन सक्दैनन् । सोमवार, माघ २१, २०७५
वडा सञ्जालको अध्यक्षमा थापा निर्वाचित वडा स्तरीय बालक्लब सञ्जालले आफ्नो प्रथम अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १० वडास्तरीय बालक्लब सञ्जालले प्रथम अधिवेशन गरेको हो । शनिवार, माघ १९, २०७५
नेपालगन्जमा फाल्गुन १६ गते शिव साधना शिविर आगामी फागुन १६ गतेदेखि नेपालगन्जमा चौथो शिव साधना शिविरको आयोजना हुनेभएकोछ । ५ दिने सम्म सञ्चालन हुने सो शिव साधना शिविरको यतिवेला आयोजकले तिव्र तयारी गरिरहेकोछ । शनिवार, माघ १९, २०७५
मालपोतमा कर्मचारी अभाव भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके कर्मचारी अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा जग्गा बाँडफाँडका लागि परेको निवेदनको सनाखतमा समेत प्रभाव परेको छ । पछिल्लो एक महिनाको अवधीमा तीन सय ६८ जना मोही किसानले जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन दिएका छन् । शनिवार, माघ १९, २०७५
अरुणोदय माविद्वारा बुद्धिमानलाई सहयोग करेन्ट लागेर दुवै हात र खुट्टा गुमाएका बाँके बैजानाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का बुद्धिमान कुंवरको उपचारका लागि विद्यालयले ६ हजार १ सय ३० रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । शुक्रवार, माघ १८, २०७५
शंखधर चोक बनाउँन ज्ञापनपत्र बिहिवार, माघ १७, २०७५